Fividianana Default Default - World Trade Exchange
NY ORINASA MANARAKA ANAO TONTOLO IZAO dia tsy afaka mamaly ny trosany na manao fandoavam-bola noho ny korontana nateraky ny LED COVID tamin'ny taona 2020.
Orinasa mitombo isa sy mpindrana tsirairay manerantany no tsy afaka mamerina ny trosany na tsy afaka mandoa zanabola noho ny fanakorontanana entin'ny covid. Voadona mafy noho ny fanakorontanana nateraky ny covid ireo mpampindram-bola, izay nahatonga ny fitotonganana ara-toekarena tsy mbola nisy toy izany ka nandratra ny fahafahan'ny mpampindram-bola mandoa trosa.
NY fampindramam-bola ratsy sy ny ASETSITRA mikorontana dia mijanona amin'ny olana lehibe indrindra manoloana ny karama sy ny INSTITUSIANA VOLA manerantany.
Ireo andrim-panjakana ara-bola manerantany dia mbola miatrika fiakarana marim-pototra amin'ny fampindramambola tsy manatanteraka (NPL). Ny famahana ny fanararaotana ny fananan-tany tsy fanatanterahana (NPA) no fanamby lehibe atrehin'ireo ankamaroan'ireo mpampindram-bola tamin'ny 2021, satria nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny banky sy ny vola hafa, ny vola miditra, ny tombom-barotra, ny renivola ary ny volan'ny banky sy ny vola.
Ny fikorianan'ny fanodinam-bola trosa farany teo, ny tsy fahombiazana ary ny fatiantoka avo lenta nateraky ny fanakorontanana notarihin'i covid tamin'ny taona 2020 dia nampitombo ny fahafantarana ny filàna fitantanana fampindramam-bola. Inona no fomba mahomby indrindra hifehezana ny risika amin'ny trosa amin'ny portfolio-trosa anao?
WTE CREDIT DEFAULT SWAP NO VALINY!
WTE credit default swap dia fitaovana ara-bola miaro ny indram-bolanao sy ny fanananao ara-bola hafa amin'ny loza ateraky ny tsy fandoavam-bola, ny tsy fahombiazana, ny fatiantoka, ny fisondrotan-taham-bola, ny fatiantoka ary ny hetsika tsy ampoizina.
MIARO NY fampindramam-bola sy ny kitapom-bola manohitra ny risika, ny lesoka ary ny trangan-javatra CREDIT.
Raha tsy mahomby ny fampindramam-bola sy ny fanananao ara-bola, aza manome ROI, mahazoa fatiantoka, fihenan'ny sandam-bola, na tsy mahomby amin'ny antony rehetra, CDS dia manome antoka fa hahazo 100% ny sandan'ny vola amin'ny fanananao ianao.
Tsindrio eto raha hahazo tombony bebe kokoa